Matongerwo eNyika, 30 Zvita 2015
Chitatu 30 Zvita 2015
Zvita 30, 2015
MDC-T neZanu PF Dzoshorwa Sezvo Dziri Kutadzira Vanhu Vakawanda Munyika
Vaoongorora zvematongerwo enyika vanoti kurwira zvigaro, pamwe nekudzingana kuri kuita muZanu PF, pamwe nekudzingana nekupatsanuka kuri kuitikawo muMDC kwasiya veruzhinji vasisina tarisiro munyaya dzematonmgerwo enyika.
Grain Millers Association of Zimbabwe Yoyambira Kukwira kweMutengo weChibage
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe riri kuyambira kuti mitengo yechibage nehpfu ichakwira zvakanyanya mumaziva mashoma anotevera sezvo pasina kunyatsowirirana pakati pesangano iri nehurumende panyaya yekutenga chibage kunze kwenyika.
VaZhuwao Voshorerwa Kuda Kumutsiridza Chirongwa cheNational Youth Service
Mapato anopikisa akaita seMDC ne People’s Democratic Party anoti VaZhuwao vanoda kuzoshandisa vechidiki ava kumbunyikidza vanopikisa munguva yesarudzo.
Zvita 29, 2015
Pasuwa Onyorerana Chibvumirano neZIFA
Zimbabwe Footballers Association kana kuti Zifa inonziwo yapa murairidzi wemaWarriors Callisto Pasuwa chibvumirano chekuti ashande kwemakore matatu achirairidza chikwata ichi.
Vakawanda Vanoti Gore ra2015 Aive Marwadzo Sezvo Vaidya Nhoko dzeZvironda
Vachitaura pagungano reSouthern African Political and Economy Series (SAPES) Trust mu Harare, mutungamiri webato rePeople’s Democratic Party, VaTendai Biti, vakati maomero ezvinhu muna 2015 anga akatarisana nevemumaguta pamwe nevemumamisha.
Vagari vemuHarare Vanoti Mitemo yeHurumende Yopa Kuti Nzara Ipfunye Chisero Mudzimba Dzavo
Gore rino hurumende yakapa mvumo kumakanzuru kuti adzinge vanotengesa mumigwagwa zvikuru sei panzvimbo dzisingabvumidzwe ichiti vaisvibisa maguta nemadhorobha.
Varimi Voyaura kuMashonaland West neKusabhadharwa neGMB
Varimi vanoti vanoshushikana zvikuru kuti hurumende kuburikidza neGMB iri kutadza kuvabhadhara mari yezvirimwa zvava kaendesa kumatura ehurumende gore rapera.
Misoro yeNhau, Chipiri Zvita 29, 2015